Black Magic: KON-BOOT v2.3 For Windows [5.3 MB]
KON-BOOT v2.3 For Windows [5.3 MB]
Posted by Black Magic | Posted in Computer Softwares , Hacking , နည်းလမ်းများ | Posted on 2:24 PM
Kon-Boot is an application which will silently bypass the authentication process of Windows based operating systems.Without overwriting your old password! Easy to use and excellent for tech repairs, data recovery and security audits. This Kon-Boot version works with both 64-bit and 32-bit Microsoft Windows operating systems and also include privilege escalation feature.
တောင်းထားတာကတော့ v2.2 ပါ။ ရှာကြည့်လိုက်တော့ 19/11/2013 နေ့ထွက် နောက်
ဆုံး ဗားရှင်းလေးတွေ့လို့ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းဒါလေးက
Windows ရဲ့ Administrator Account မေ့သွားသူများ ကျော်နိုင် ခွနိုင်တဲ့ Software လေးပါ။
USB Mode နဲ့ကျော်မလား...CD/DVD Mode နဲ့ကျော်မလား... နည်းမျိုးစုံ သုံးနိုင်တဲ့ကောင်လေးပါ။
သုံးနည်းကို တော့ " ဒီမှာ " ရေးပေးဘူးပါတယ်...၊ ဆောင်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က အဆင်ပြေမယ် Link ကနေ Down နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...၊
Download From Tusfiles | Or | Download From Uppit
Uppit ကနေ Down ရင်တော့ Generate Link ကိုနှိပ်ပြီး Down နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။
Tusfiles ကနေ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် အောက်ကလိုစာတန်းရဲ့ဘေးက အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ပြီးမှ အလယ်တည့်တည့်က Download File ကို နှိပ်ပါ..၊
Microsoft Windows 8 and 8.1 32Bit/64Bit (all versions including EFI, local authorization only)
Fixed few stability issues on Windows 7